AFAAN OROMOO GUDDATAMOO QUUCARAA JIRAA? -Muuxannoo Obbo MIlkeessaa Miidhagaa! – Beekan Guluma Erena
AFAAN OROMOO GUDDATAMOO QUUCARAA JIRAA? -Muuxannoo Obbo MIlkeessaa Miidhagaa!	Beekan Erena
Poems June 18, 2016OROMOO
140SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
AFAAN OROMOO GUDDATAMOO QUUCARAA JIRAA?
Muuxannoo Yunivarsiitii Finfinnee (Waraqaa Dhihaaterratti) –
Korri Qorannoo sadarkaa guddina Afaan Oromoo irratti kaleessaafi dheengadda (16-17/ 06/ 2016) Yunibarsitii Finfinnee, Muummee Afaan Oromootiin gaggeefamee jira. Hayyuun afaanii tokko, “Afaan Oromoo quucaraa moo guddataa jiraa?” kan jedhu dhiyeessani. Qorannoo Ministeerri Barnootaafi BBOn matumti isaanii bara 2010 gaggeessaniin, Oromiyaa keessatti, barattoonni kutaa 3ffaa xumuran dhibbentaa 40 kan ta’an jecha tokko barreessuu hin danda’ani; kutaa 4ffaa warri fixan immoo dhibbentaa 30 kan ta’an jecha tokko barreessuu hin danda’ani. Kaayyoon barnoota kutaa 1-4 “dubbisuufi barreessuu akka danda’aniif baratu.” Barnoonni kutaa 4ffaa olii garuu “barachuudhaaf dubbisanii barreessuu” ture jedha saayinsiin barnootaa. Kuni hunduu kufaa jira jedhan hayyuun sun. “Dur warra keenyatu mee xalayaa kana naaf dubbisi nama biraadhaan jedhu ture; amma garuu, kutaa 10 barataan fixes mee xalayaa kana naaf dubbisi jechaa jira” jedhani ogeessi afaanii sun. Afaan Oromoo quucaraa jira jedhani. Sababboota isaan kaasanis: (1) barsiisonni qubee qajeeloon barreessuu utuu hin bariin afaan akka barsiisan ta’uu; barsiisonni seerluga afaanii sirriitti hin beekne barnoota kaan illee haala ijaafi ijoo hin qabneen barsiisu waan ta’eef; (2) silabasiin ittiin barsiifamaa jiru, karaa saayinsawaan kan qophaaye miti jedhani. Sana jijjiiruuf yaalaa jira BBOn jedhani. (3) barnoonni daree dhuunfaa (self-contained) jedhamu kun barsiisaa tokkotu barnoota hunda kutaa 1-4 kenna waan ta’eef, barsiisaan sun qubee hin danda’u taanaan dhaloota sana hunda bishaanitti waggaa afuriif naqa. Barsiisaan tokko barnoota hunda akkamitti danda’aa?; (4) Afaan Oromoo waajira mootummaa keessatti barreeffamaa jirus ijaafi ijoo waan dhabeef jedhan (xalayaa mana murtii, xalayaa qajeelcha poolisii, xalayaa waajira dhaabaa, xalayaa manneen hojii hunda kana keessatti haalli qubeessuu isaanii nama naasisa) jedhani ogeessi kun. Manni murtii Oromiyaa, seerota “yewenjel meqca hig, fitabiher hig, kkf” Afaan Hojii naannichaatti hiikkachuullee hin dandeenye waggaa 25 keessatti, jedhani ogeessi kun;
(5) Afaan Oromoo hordoffii dhabe, deeggarsa dhabe jedhani. Waajjiroonni Oromiyaa magaalota hedduu keessaa, gara fuulduraatti afaan kana dubbachuu diduuf deemaa waan jiran fakkaatu jedhan.
**Furmaata fiduuf, hundi keenya itti gaafatamna jedhani ogeessi kun (mootummaan, barsiisonni, hojjettoonni waajiraalee garaagaraa, waajiraaleen Oromiyaa hunduu, imaammanni barnootaa, manneen barnootaa, kkf). Maal wayya jettan?
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa140SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← GOCHI WAYYAANEE UUMMATA OROMOO KALLATTII HEDDUUN MIIDHEERA-(Saphaloo Kadiir irraa)
Gumii Aadaa fi Hog-barruu Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa Damee Harar—Kunoo akka kana fakkaatu!! →